Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ogige spiro - APICMO
Ịmara ahụike > Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ogige aghara
Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ogige aghara
08 / 28 / 2018Ihe site: APICMOCategory: Ịmara ahụike0 amasị
Okwu mmalite nke ogige Spiro
Otu ngwakọta bụ ihe ndị na-eme ka e nwee ihe abụọ yiri mgbanaka abụọ. N'akụkụ, ihe owuwu ahụ nwere ike ịbụ otu ma ọ bụ dị iche, na atọ nke na - ejikọta ọla abụọ ahụ a na - akpọ spiroatom (nkeji nrịta), na - abụkarị 4 carbon (nke a na - akpọkwa carbon), ọ pụkwara bakwa silicon, phosphorus, ma ọ bụ arsenic. Atọ atom dịkarị bụ carbon carbon. Ngwongwo a ga-eji parentheses dee nọmba nke yiri mgbaaka iche iche. Nọmba mgbịrịgụ ahụ nwekwara mkpụrụ ndụ atomụm n'onwe ya, obere ọnụ ọgụgụ ga-adị n'ihu ọnụ ọgụgụ ma kewaa ya site na ntụpọ.
Dịkarịa ala abụọ yiri mgbaaka na igwe ala na-ekerịta akwara carbon (na mpaghara ndị ọzọ, ndị ọzọ, dịka silicon, phosphorus, arsenic, wdg). Ihe yiri mgbaaka abụọ ahụ dị n'ụgbọelu abụọ dịka ibe ha: oghere spiro dị mma bụ chiral ma nwee ike idozi ya na isomers optical (lee isomerism anya). N'ihe gbasara ụdị, H2C = C = CH2 bụ nke kachasị ngwa ngwa, na onye na-eme ihe dị ka 1,3-propadienediic acid bụ nke na-arụsi ọrụ ike ma nwee ike kewaa n'ime abụọ isomers. ahụ.
(1) Dịka ọnụọgụ nke mkpụrụ vaịn spiro, a pụrụ ịmepụta mkpụrụ akụkụ spiro n'ime otu mkpụrụ vaịn spiro, ihe na-ekpo ọkụ, spiro atọ, na ọtụtụ akụkụ nwere ọtụtụ ihe dị iche iche.
(2) A pụrụ ịmepụta carbocyclic spiro na heterocyclic spiro dị ka ụdị atom si dị, ma mgbe atọrọ atom nke mejupụtara carbocyclic spiro na-anọ n'ọnọdụ atọ ọzọ, a na-emepụta heterocyclic spiro.
(3) Dịka ụdị mgbanaka ahụ, ọ nwere ike ịkewa ya n'ime ogige ndị na-ejupụta n'ime ya, ndị na-adịghị edozi ahụ, aromatic na aliphatic spiro.
(4) Njikọ heterospirocyclic ogige. Igwe spiro nke dị na spiro compound nwere ike ịbụ oghere carbon ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ka Si, N, P, Ge na ihe ndị yiri ya. Ọ bụrụ na spiro atom bụ amị metal, a na-ahazi njikọkọ nhazi, a na-akpọkwa mmanụ dị otú ahụ dịka ihe nchịkọta heterocyclic.
Ngwurugwu polymeric bụ ngwakọta nke abụọ ma ọ bụ karịa spiro atom dị ka atọ ma ọ bụ karịa yiri mgbaaka. Mgbe ị na-akpọ aghara, mkpụrụ okwu nke na-agbakwụnye di-, tri-, tetra-, ..., wdg na aha pụtara ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ vaịn na-adị iche n'etiti akwa ahụ. A na-agụta mkpụrụ dị iche iche dị na mmanụ ahụ. Nkọwa nke polyspirocyclic compound na-amalite site na mgbaaka mgbanaka nke na-ejikọta spiro atom, nke a na-akpọ mgbanaka akara. Mkpụrụ ndụ polyspirocyclic ndị a nwere ike ịnwe mgbaaka abụọ ma ọ bụ karịa ma jikọta ha na ngwongwo multi-spirocyclic. N'etiti ha, nanị otu nrịta nrịta na-ejikọta ibe ya. A na-esite ntin na-esote spiro atom, bụ nke a na-akpọ nọmba 1, na nomenclature nke dị na mgbanaka akara, ma na-amalite ịmalite igodo ahụ.
Enwere akara abụọ ma ọ bụ karịa, ọnụ ọgụgụ mmalite nke mgbanaka ngwụcha ga-enwe usoro nhọrọ ọzọ. Mgbe a na-agụnye spiroatom mbụ, a ghaghị ijikọta ogige ndị na-esote spiro na nke kachasị na ya. Ọnụ ọgụgụ. Ka e were ya na e nwere onyinye nwere mgbaaka abụọ, nke nwere ikikere 6 ma nke ọzọ nwere ikikere 8. Ejiri nọmba 6 malite nọmba ahụ, n'ihi na mgbe agịsịrị, spiroatom ga - agụta 6. Ọ bụrụ na mgbanaka ahụ gụnyere akara 8 amalite, a ga - agụ 8 nọmba spiroatom. Ntuzi nke ọnụ ọgụgụ ahụ kpebiri site na spiroatom (malite na spiroatom mbụ nke mgbanaka njedebe a na-agbanye akara). Ka e were ya na ụda ngba malitere ịgụta ọnụ na otu ntụziaka, ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ahụ dị ntakịrị karịa nọmba ahụ na ntụziaka ọzọ, a họọrọ ahọrọ nrọ. A na-eji ntụziaka dị nta karịa iji malite aha. N'ihe na-esote n'ogo atom, nọmba ọnụ ọgụgụ ahụ adịghị mkpa. N'ọnọdụ ụfọdụ, a ga-emepụta ihe abụọ, atọ, anọ ma ọ bụ karịa na-agbarịta ụka n'otu nọmba ahụ ma a gụchaa ha. Nhọrọ nke nhazi ntuziaka ahọrọ site na usoro ntinye mgbe a na-ezute ọnụọgụ dị iche iche nke nkedo awara, a na-ahọrọ ntụziaka nke ọnụọgụ nke ọnụ ọgụgụ dị ala. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na usoro ọnụọgụgụ na otu ntụziaka, ọnụ ọgụgụ nke spiroatom ọ bụla bụ 3, 5, 7, 10, na ọnụ ọgụgụ nke spiroatoms na nke ọzọ bụ 3, 5, 7, 9, mgbe ahụ ntụziaka nke nọmba nke abụọ họrọ. . N'okwu a, na ntụziaka nke ọnụ ọgụgụ mbụ, nọmba dị n'etiti etiti abụọ dị gburugburu bụ 7 na 10, nakwa na ntụziaka ndị ọzọ, 7 na 9. Ọnụọgụ nke nkedo ọ bụla ma ọ bụrụ na nke ahụ adịghị mkpa, na ntụziaka nke nọmba ahọpụtala na nhazi 9.
N'ịkpọ aha mgbaaka ọtụtụ spiro, ọnụ ọgụgụ mbụ na ntinye aka na-egosi na atọ dị na mgbaaka mbụ kachasị na spiro atom bụ nọmba ahụ. Nọmba ndị fọdụrụ na-anọchite anya ọnụ ọgụgụ nke amị dị n'etiti etiti spiro, ma ọ bụ akara dị na mgbanaka ọnụ. A na-ekewa nọmba ọ bụla site na oge (oge Bekee). Na ihe atụ a, e nwere puku abụọ (nọmba 1 na 2) tupu ọnụọgụ mbụ (3). Enweghị ikike ọ bụla n'etiti 3 na 4 spiroatoms, otu ihe ahụ bụ eziokwu maka spiroatoms na 4 na 5, 5 na 6. Enwere ikike abụọ na mgbanaka nke abụọ, 6 na 5, 5 na 4, na e nwere otu n'etiti 4 na 3.
Ya mere, a na-enweta usoro [2.0.0.0.2.1.1.1]. Na ihe atụ na nri, e nwere ọnụọgụ abụọ, ya mere, aha dispiro amalite. Na akpa mgbanaka mbụ, enwere mkpụrụ abụọ, na-egosipụta aha dispiro [2. Na-esote, enwere otu na anọ dị na mbempe ndị ọzọ dị n'etiti etiti abụọ ahụ, na-ekpughe aha ahụ abụọ [2.1.3 5]. A gbakwunyewo spiroatom nke abụọ, 5 a na-akpọ, ụzọ nke ga-ezute ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ mgbe ọnụọgụgụ nke ọnụọgụ dị na mgbanaka ngwụcha, oge ikpeazụ na-agbakwụnye 9 na 10 atomatụ n'etiti 3 na 5 spiroatoms Mgbe ahụ gbakwunye otu alkane nwere ọnụ ọgụgụ nke ọnụọgụ nke spiro, decane, ahaispiro [2.1.3 5 .2 3] bụ nke aha ahụ gosipụtara.
General nomenclature nke spiro ogige
Ihe ndị dị na monospirocyclic na-ekpebi aha nne na nna na-emepụta mmanụ ala dịka ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke carbon carbon dị na ntanaka ahụ; a na-agbanye ihe niile a na-agbanye n'igwe na-acha ọkụ ọkụ na obere mgbanaka na mgbanaka dị ukwuu ma na-agbatịkwa mkpụrụ ndụ spiro; mgbe ahụ, akụkụ brackets anọ na-esote ha. Usoro nchịkọta nke mgbaaka dum gosiri nọmba nke carbon carbon atomwiched n'etiti ụdị spiro dị iche iche, gbakwunyere n'aha aha hydrocarbon nke kwekọrọ na mgbanaka dum; ọnụ ọgụgụ dị iche iche dị iche iche dị iche iche, n'ụdị ahụ: snail [a, b] alkane.
Mmetụta ajuju nke mgbanaka akara ume pụtara na mkpụrụ abụọ electron-positive ma ọ bụ otu ụzọ abụọ nke electrons na conformation dị n'akụkụ nke ọzọ iji belata oge dipole nke mole ahụ ma belata ume ike. Na 1968, otu nyocha nchọpụta nke mbụ na-ebute ụzọ mgbapụta. Mgbe ha na-amụ acetal bicyclic, ha chọpụtara na ogidi abụọ ahụ dị n'okpuru ebe a bụ 57% nke isomer cis na 43% nke trans isomer na ngwakọta nhazi na 80 C. Njikọ isomer cis bụ trans. mgbanwe ike nke 0.71 kJ / mol. N'ihi mmetụta anomeric nke isomer cis, trans isomer enweghị mmetụta dị otú a.
Ụfọdụ ogige na-egbuke egbuke nwere arụrụala axial. Akparita ume nwere ike ịbụ ebe chiral, ọbụna mgbe ha na-enweghị ihe anọ dị iche iche dị mkpa iji chọpụta ịdị ọcha. Mgbe ihe abụọ ahụ yiri otu, usoro CIP na-enye ihe ka mkpa iji gbasaa mgbatị nke otu mgbanaka na mgbanaka ọzọ nke ihe kacha mkpa. Enwere ike itinye ya n'ọrụ mgbe mgbanaka ahụ abụghị otu.
A pụrụ ịhazi ogige cyclic site na njedebe ndị a:
• Ụlọ ọka alicyclic
Nke a bụ ngwakọta organic nke bụ ma ọ bụ akụkụ aliphatic na ihe ndị dị na cyclic. Ha nwere otu ma ọ bụ karịa ejikọta ma ọ bụ unsaturated carbocyclic yiri mgbaaka, ma ndị yiri mgbaaka adịghị aromatic.
Dị ka nha nke mgbanaka ahụ, a na-ekekọta ndị na-ekpo ọkụ n'ime obere, ọkara na nnukwu. Cyclopropane na cyclobutane dị obere. Mmiri cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane, na cyclooctane na cyclotridecane bụ ndị dị ogo, a na-ewerekwa ibu ka nnukwu ụfụ.
Nke a bụ hydrocarbon cyclic nwere nkwonkwo abụọ carbon-carbon. Mfe monocropic cyclic na-agụnye cyclopropene, cyclobutene, cyclopentene na cyclohexene, ebe ndị na-eto eto cyclic nwere cyclopropadiene, cyclobutadiene, cyclopentadiene. Chere. Ụfọdụ olefins cyclic, dịka cyclobutene na cyclopentene, nwere ike ịme ka polymerized dị ka monomers iji mepụta polymers.
• Ngwá ọrụ hydrocarbon
Ngwongwo aromatic kachasị dị mfe na nke kachasị mkpa bụ benzene na ihe ndị yiri ya dị ka toluene, xylene, ethylbenzene na ihe yiri ya. Na aromatics, ụfọdụ ihe atụ ndị na-adọrọ adọrọ abụghị ihe akụkụ zuru ezu, kama carbon ndị dị na ha na-anọchite anya nitrogen, oxygen, sulfur na ihe ndị ọzọ. Anyị na-akpọ ha heterocycles, dịka yuan ise dika furan. Oghere na-agụnye oxygen atom na pyrrole nwere ntinye nitrogen.Thiophene nwere sulfur atom na ihe yiri ya.
Na aromatics nwere ike kewara n'ime:
• Polycyclic aromatic hydrocarbon
A na-akpọkarị hydrocarbons aromatic aromatic hydrogen carbon na aromatic hydrocarbons dị iche iche, ethylbenzene, styrene, na ihe yiri ya.
• Ngwongwo Heterocyclic
Ọ na-agụnye mgbanaka aromatic nke na-adịghị agụnye mgbanaka heterocyclic ma ọ bụ ihe mgbakwunye. Ọtụtụ n'ime ha maara ma ọ bụ nwee carcinogens. Ihe kachasị mfe nke a bụ naphthalene, na abụọ aromatic yiri mgbaaka, yana tricyclic ogige ruthenium na phenanthrene.
Polycyclic aromatic hydrocarbons bụ ndị na-anọpụ iche, ndị na-abụghị polar molecules hụrụ na kol na tar nkwụnye ego. Ha na-ejikarị combustion na-ezughị ezu (dịka, engine na incinerator, mgbe ọkụ na-ere ọkụ na combustion biomass, wdg). Dịka ọmụmaatụ, njedebe zuru oke nke mmanụ ụgbọala ndị dị ka nkụ, ọkụ na-esi n'ọkụ, griiz, na ụtaba emepụta ya. A na-ahụkwa ya n'ọkụ anụ.
Polycyclic aromatic ogige n'elu atọ yiri mgbaaka nwere obere solubility na obere vapo nsogbu na mmiri. Mgbe aro ahụ dị arọ na-abawanye, njedebe ma ọkpụkpụ vaịn na-ebelata. Ngwongwo aromatic polycyclic bicyclic bicyclic nwere mgbatị ala na nrụrụ vapo. A na - ahụkarị Polycyclic ogige aromatic na ala na na sistem karịa mmiri na ikuku. Otú ọ dị, a na-ahụkarị ogige aromatic polycyclic na ihe ndị a kwụsịrị na ikuku.
A kọwawo ọtụtụ ogidi aromatic polycyclic dị ka carcinogens. Nyocha akwụkwọ nyocha na-egosi na mmetụ dị elu nke oghere aromatic polycyclic nwere ike ịkpata ọrịa kansa, ọrịa cancer akwara, ọrịa kansa na ọrịa cancer. Polycyclic aromatic ogige nwere ike ibibi mkpụrụ ndụ ihe nketa na ahụ, na-eme ka uto nke ọrịa cancer ma na-amụba ọrịa cancer.
Mgbe a na-amụba arọ arọ, a na-arịwanye ụbụrụ nke polycyclic aromatic na-arịwanye elu, na-arịwanye elu nke toxicity. Ngwunye aromatic polycyclic, Benzo [a] pyrene (Benzo [a] pyrene), bụ nke mbụ chemical carcinogen ka a chọpụta.
Polymer expansion agent
Akwa olu nke polymer n'oge polymerization ma ọ bụ ihe siri ike bụ van der Waals na-amanye n'etiti mkpụrụ ndụ monomer na mmiri mmiri ma ọ bụ na mkpụrụ ndụ ndị na-achaghị ogologo, na ebe dị n'etiti mkpụrụ ndụ dị oke; mgbe polymerization ma ọ bụ crosslinking, Njikọ ihe jikọrọ n'etiti oghere nghazi na-eme ka ịghasị nke olu polymer. A na-ekwu na shrinkage mgbe ụfọdụ na-egbu onye polymer, dịka ime ka ịka nká nke polymer, deformation, na ibelata arụmọrụ zuru ezu. Iji dozie nsogbu iweghachị nsogbu nke ngwọta nke polymer, ndị na-emepụta chemists emeela mgbalị na-enweghị mgbagha, ma n'ozuzu ha nwere ike ibelata na enweghị ike iwepụ nsị ụda kpamkpam. Ruo 1972, Bailey et al. mepụtara usoro nke spiro ogige ma chọpụta na a na-eme ka ogige ndị a dị n'otu. Mgbe olu anaghị ada mbà, ọ gbasaa. Nchọpụta nke monomers gbasaa agbasawo mmasị ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị, a rụwokwa ọtụtụ nyocha. Ọkpụkpụ ndị na-amụba amụba aghọwo ihe ọrụ polymer. Ogige ndị a na-ahazi dị ka spiro orthoester na spiro orthocarbonate bụ ezigbo monomers na-ebuwanye ibu ma jiri ya mee nkwadebe nke ndị dị elu, ndị na-arụ ọrụ dị elu, ihe ndị nwere ike ịmepụta ihe na ihe ndị ọzọ. Mgbanwe nke polymers na nzube na njikọ nke oligomers nwere ọrụ arụ ọrụ.
Ma ọ bụ ma ọ bụ na ọ bụ na mmanụ organic emetụ ìhè na wavelength nke ọkụ ọkụ na arụmọrụ nke ọkụ ọkụ na-adabere karịsịa na usoro ihe owuwu. Mmiri na-emekarị na mkpụrụ ndụ nke nwere mgbagwoju anya na usoro conjugated, nke na-eme ka mmetụta nke ikuku eletrik na mmekọrịta nke ụmụ irighiri ihe, nke dị irè iji melite arụmọrụ fluorescence. E nwere ọtụtụ ihe ọkụkụ-ihe ndị gbara ọchịchịrị. Ụdị ndị bụ isi bụ: mgbanaka spiro, poly-p-phenylene vinylene, polythiophene, polythiadiazole na metal ngwakọta ogige. N'etiti ha, spirocyclic aromatic ogige nwere nnukwu conjugated usoro na ezi rigidity na coplanarity, akwa iko mgbanwe okpomọkụ na elu kwes kwụsie ike. Ngwaọrụ EL dị mfe na usoro anaghị achọ ihe akụrụngwa, ya mere, ọ ga-ekwe omume belata oge ịmepụta oge na iji kwadebe ngwa ngwa.
Ngwunye fused na spiro compound nwere hetero atom adịghị mfe ịmepụta nkwụsi ike n'ihi usoro ọrụ ha pụrụ iche, ha enwetakwa nlezianya buru ibu na mmepe nke pesticides. Dịka ọmụmaatụ: Rudi et al. kọọrọ 3,9-dichloro-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro [5.5] na-adịghị emepụta-3,9-dioxide na sulfide hydrogen iji mepụta mkpụrụ ndụ ihe atụ, 3,9-dihydro-3,9-dithio-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphospho [5.5] undecane. Ihe ndi ozo bu ndi ohuru nke organophosphate insecticides and herbicides, nke nwere ike wepu mkpuru osisi, ragweed, wdg site na wheat, ọka, owu na soybean.
Previous Previous post: 2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (Chemical Abstracts Services) Ndenye aha 22536-61-4
Osote Next post: Otutu ihe omimi nke di n'uwa